လမ်း 3: Shweet — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
လမ်း 3: Shweet
ထိုပြည်၌သင်တို့သည် အကယ်. ရပ်တည်ချက်အတွက်အနည်းငယ်ဆူညံသံ Make
သငျသညျဝံ့လျှင် Godman အပေါ်ဝါကွှား, သငျသညျဝံ့သာလြှငျ
ဒါက shweet ခံရချင်ပါတယ်
သငျသညျဝါကွှားသညျ့အခါက tags များနှင့်အတူအဝတ်ကိုရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း '' မဟုတ်ခဲ့လျှင်အဘယျသို့?
post ကို Hook:
သူတို့ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကတက် gassed တယ်, ကကထုတ်တဲ့အပေါ်
သာ. ကောင်း၏တစ်ထီးရ, ဘုရားသခငျသညျစိုးစံ
D ကိုမြို့အကြှနျုပျဆငျးသကျကိုင်, သူတို့ငါ့ကိုဖန်ဆင်းရှိရာင်
ငါနောက်ကျောရှိတယ်သောအခါ,, ငါ vaca-့ရာတွင်မဖြစ် (vacationing)
ငါအိမ်ပြန်တာနဲ့တူခံစားရ, တည်းခိုစဉ်းစား, ငါသော်လည်းတည်းခိုသည်မဟုတ်
Lone ကြယ်ပြည်နယ်ရပ်ကြီး, ဘယ်လိုကိုယ်ကမေ့လျော့တော်နိုင်
သို့သော်လည်းငါသည်အပြာထဲကတက် pop သည်မဟုတ်
ဒါဟာသူသည်ငါ့ကိုဖုံးအုပျပုံကိုပျံသန်းမယ့်, ငါဖိနပ်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းပြောနေတာသည်မဟုတ်, ပစ်ခတ်
ငါပြဿနာတွေအများကြီးရတယ်ဒါပေမယ့်ငါဖြောင့်တယ်, က shweet င်
ငါသည်ငါ၏ဘုရားသခင့အိုင်၌သူတို့ကိုဆမ်းလိမ့်မည်ကိုသိ, က shweet င်
post ကို Hook
ထိုအစဉ်အဆက်ကတည်းက 2010 ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရဲ့
Lone ကြယ်ပြည်နယ်ရပ်ကြီး, ဘယ်လိုကိုယ်ကမေ့လျော့တော်နိုင်?
အလယ်တန်းကျောင်းကျွန်တော်တို့သော်လည်း swisha အိမ်သူအိမ်သား bumpin ခဲ့သည်
သူတို့လိုအသံကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်ခဲ့ swisha အိမျတျောကိုစီးဆင်း
ဟုဆို, "လူကိုတက်ကိုင်, ငါပြုဘူးဆင်း လာ.
ပင်စည်ပေါ့ပ်, gripping ဘောဇဉ်, ကလေး "ချနေဖို့
ကဲ့သို့, “ငါ၏အလက်ကောက်ဝတ်ရေခဲမုန့်နဲ့တူ froze Man”
ထိုအခါငါအသကျရှငျသညျ လာ., bruh
လူအပေါင်းတို့သည်ဂြိုလ်နှင့်ကြယ် directing နေစဉ်, shweet
လူတိုင်းက shweet ရဲ့သွားနှင့်ဝါကွှား (4X ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ)